Happy New Year Image Mapikicha E 2021 || SmsQuotes.In
50+ Happy New Year Image Mapikicha E 2021 || Kukadzi 2021 Yakagadziridzwa Mifananidzo
AmritaThakur Mbudzi 7, 2020 1st Muchato Anniversary Wishes, Anniversary Keke Nemufananidzo, Anniversary Mifananidzo Mifananidzo, Birthday Cake Photo Chimiro, Birthday Cake Nemufananidzo, Makadhi Ekuzvarwa Ane Zita, Bhavhudhe Anoshuvira Nemufananidzo, Anofara Anniversary Cake Photo, Anofara Anniversary Mifananidzo, Anofara Anniversary Photo, Goredzva Rakanaka 2021, Happy New Year Gifs, Happy New Year Kwaziso, Happy New Year Mufananidzo, Happy New Year Images, Happy New Year Mharidzo, Happy New Year Messages, Goredzva Rakanaka Mifananidzo, Happy New Year Pics, Goredzva Rakanaka Quotes, Happy New Year Sms, Happy New Year Wallpapers, Happy New Year akashuva, Happy New Year's Eye, Kuroora Anniversary Keke Photo, Kuroora Anniversary Mifananidzo, Mufananidzo Pane Anniversary Keke, Mufananidzo Pazuva Rokuberekwa Keke, Muchato Anniversary Mifananidzo, Muchato Anniversary Anoshuvira Kune Shamwari, Zuva reMuchato Mifananidzo 1 Komenda
1 Zuva reGore Idzva Haisi Zuva reMakwikwi
2 Ungaita Sei Kuti uve Nenoshamisa Kutanga kune Idzva Idzva
3 8 Matanho Matsva Evanhu 2021 – Maitiro Ekuita Kuti Gadziriso Yako Idzva Idzva Iitike
4 Iyo Yakanyanya Kupinda YeGore Idzva
5 10 Nzvimbo Dzakanakisa dzekuenda Kugamuchira Gore Idzva muIndia
6 New Year-Kubwinya In The soro! Runyararo Pasi Pano!
6.1 Chii chauchachengeta mundangariro final yr ye?
6.2 Makapedza sei?
6.3 Wakapinda sei Gore Idzva?
6.4 Unoisa kupi Jesu Kristu?
7 Zvinangwa Zvitsva, Goredzva
8 50+ Happy New Year Image Mapikicha E 2021
9 Goredzva Rakanaka Malayalam
10 Goredzva Rakanaka muMalayalam
11 Goredzva Rakanaka muJapan
12 Goredzva Rakanaka HD Video songs 1080p free download
13 Goredzva Rakanaka HD Movie
14 rufaro rwegore idzva bhojpuri song
15 Goredzva Rakanaka 2074
16 Goredzva Rakanaka Kumurume
17 Goredzva Rakanaka Vhidhiyo inosetsa
18 Goredzva Rakanaka hd movie download
19 Goredzva Rakanaka 2019 dj song
20 Goredzva Rakanaka 2020 animated gif
21 Goredzva Rakanaka 2021 mapikicha emifananidzo
22 Goredzva Rakanaka 2019 mureza
23 Goredzva Rakanaka 720p download
24 2020 Goredzva Rakanaka Photo
25 Diwali poster poster
26 download kufara itsva gore mifananidzo
27 Mangwanani akanaka Goredzva Rakanaka
30 Kisimusi yakanaka uye mifananidzo yakanaka yegore idzva
32 gore idzva rinoshuvira vhidhiyo
33 nziyo dzegore idzva muHindi
34 gore idzva eve zvinoreva
35 kufara parsi gore idzva
36 mufananidzo gore idzva
37 kupemberera gore idzva padhuze neni
38 makorokoto egore idzva muHindi
39 Goredzva Rakanaka Changamire
40 ndinofara new year song mp3
41 Goredzva Rakanaka video song free download
42 ndinofara new gore movie video songs
43 Goredzva Rakanaka sms
44 Happy new gore meseji 2021
45 mufaro wegore idzva muMarathi
46 Goredzva Rakanaka Movie Torrent
47 Goredzva Rakanaka Malayalam
48 Happy New Year Sms Kune Anoda
Zuva reGore Idzva Haisi Zuva reMakwikwi
Wese mutori wechikamu anoda kuhwina mukombe. Nyanzvi dzezvemitambo dzinochengeta fomu kuburikidza nemwaka wakaderera zvisinei asi mushandirapamwe wekushambadzira mushandirapamwe unotanga nekambi yekurairidza.
Mushure memavhiki akati wandei, preseason inotanga. Pano mutambi anotangazve kupinda mugero rekukwikwidza. Nepo munhu wese achifanira kuhwina chinangwa chaicho chemitambo yepreseason yemavhidhiyo ndeyekuyera kushanduka kweanotora chikamu kuita mumwe nemumwe uye neboka.
Vamwe vatambi havazoite boka racho. Pamusoro, maneja anoisa iro rinobudirira kwazvo boka raanogona padanho nechinangwa chekubatsira mukwikwidzi pakupera kwemwaka.
Makwikwi dzimwe nguva anowanikwa kana kuiswa zvisirizvo kutanga mwaka usati watanga. Kazhinji kunozvidzora yega nhengo yeboka ine mwaka wakaderera, kudzidzisa musasa, uye preseason inoita iyo yese mutsauko.
Izvi zvinodii kuita nekubudirira kwedu kwakazvimirira kunotevera yr? Zvese.
Imagine the supervisor telling his gamer, “OK, listen here guys. Panguva yekudzidzira musasa ndinoda kuti iwe uyedze kupotsa bhora iwe paunenge uchisimudza chiremwaremwa. Pamukana usinganzwisisike mumwe munhu akarova bhora, Ndinoda kuti uve nechokwadi chekusaibata kana ikauya padhuze newe. Uye kana iwe uriwe unorova bhora, chero chaunoita, usamhanye iwo mabhesi.”
Ipapo, mushure memusasa uye pre-mwaka muchengeti anoti, “Izvi ndizvo varume. Zvese zvatakashanda zvakaoma kudaro. Izuva reChampionship. Nhasi, ita shuwa kuti kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge usapotsa bhora. Apo vamwe varume vakarova, unofanirwa kuibata nguva dzese. Uye mhanyisa iwo mabheseni sekunge hupenyu hwako hwotsamira pairi. Endai munotora!”
Tora nyanzvi yemubatanidzwa uye muite kuti atevere achishaya bhora kwenguva yakareba uye zvinomutorera imwe nguva kuti uwane zvakare kurova bhora mune chero rukudzo..
Izvo zvakafanana iwe neni. Tave tichishanda takananga kune ese asiri iwo kugona.
Tinoda chinhu chimwe chakakwirira. Saka isu tinogadza New Year Resolutions kana zvinangwa. Zvinosuruvarisa, vazhinji vedu tichakundikana. Kwete semhedzisiro yekuti isu hatina kunyatsoda kana kuedza zvechokwadi, zvisinei nekuda kwekuti isu takagadzirira zvisirizvo mukati memwaka wakaderera (aka yekupedzisira yr).
Saka ngatitorei zano nyowani iri yr. Rega Zuva reGore Idzva rive iro starting of a profitable marketing campaign. Ngatitaurirei kuzvidzora kwedu kukuru zvakadaro rangarirai tanga tichitandara ne “off-mwaka” kwechinguva ikozvino. Tichaita zvikanganiso, kubatana mune mamwe maitiro apfuura, uye chokwadi, tichatokundikana.
Asi ramba wakashinga uye wakarangwa. Patinokundikana, tanga zvakare zvakare neruzivo rwatakawana mukundikana. Wongorora chakakonzera kutadza uye edza kugara kure nemamiriro ezvinhu anotevera nguva.
Pamusoro, tinogona kuona kuti mumwe mutambi (zvinangwa zvedu zvitsva) hazviite boka racho. Tinogona kungoona kuti isu tinokwanisa kuhwina mukwikwidzi wedu navo. Zvirinani zvakadaro, tinogona kuona kuti chinangwa chacho chaive chisina kukwana zvakakwana kwatiri.
Inguva yekuisa yedu yakakura boka pane iyo sphere uye titange yedu inobatsira pabasa yekushambadzira.
Zuva reGore Idzva harifanirwe kuve repamusoro. Zuva reGore Idzva nderega nemasikirwo aro kutanga.
Ungaita Sei Kuti uve Nenoshamisa Kutanga kune Idzva Idzva
Uri pamusoro peyokupedzisira yr yatove zvakadaro zvisati wasarudza maitiro ekuona kuti iyi yr ndiyo yako hombe asi? Ndine zano rimwe chete kwauri.
Kuonga ndiko kutyaira kwakanyanya kwazvo kunogona kuwedzera mufaro wako, gadzira hukama hune rudo, uye kunyange kusimudzira hupenyu hwako. Tsvakurudzo zhinji yesainzi, pamwe chete nekuongororwa nevefendend vezvepfungwa Robert Emmons naMichael McCullough, vaona kuti vanhu avo vanoziva vanoziva hunyanzvi hwekuonga zvirinani kugadzikana kwepamoyo uye kugadzikana kwemuviri kupfuura avo vasina.
Inonzwika senge yakakodzera nzira yekutanga iyo nyowani yr eh?
Hazvina mhosva kuti chii chakaitika pamberi pezvino, parizvino izuva nyowani idzva uye wawana kugona kunyatso shandura mashandiro anoita hupenyu hwako mukati 2017. Imwe neimwe yr ini ndinoita tsika yegore rega yekuongorora yangu yazvino yr's ANNUAL GRATITUDE Tsamba paEvha yeGore Idzva uye kufungisisa pane zvese zvandinoonga. Kana iwe uchida kuita izvo zvakare wobva watanga nekufungisisa pane vese vanhu iwe vaunotenda muhupenyu hwako, zviitiko uye kuwedzera uye kudzidza kwauinako mukuwedzera kune zvisirizvo uye zvikanganiso.
I then start the brand new yr on New Year's Day by penning my new yr's tsamba yekutenda, kuisa mukufamba kwenguva zvese zvandinoda kuti ndinzwe chaizvo, fungidzira, ona uye ita. Kana iwe uchishuvira kutanga iyo yr zvakanaka uye uchida kuve nekuenda kunyorera yako yega Yekutenda Tsamba ye 2017 wozotanga nekuzvibvunza wega mibvunzo.
MASHUMO mashanu anobudirira anobvunza kubvunza yako yr
Imwe neimwe yr mushure mekunge ndagara pasi kunyora tsamba yangu yekutenda yegore rega ini ndinotanga neyangu 5 mibvunzo – Ndinovimba vanokukurudzira kuti utore zvakakura uye ugone kukura muhupenyu hwako:
Ndinoda sei kunzwa chaizvo?
Chii chekudzidza uye kufambira mberi chandinoda kuve nehunyanzvi?
Chii chandinoda kuti hukama hwangu huve?
Ndingaite sei kuti ndibatsire?
Chii chiri changu chakasarudzika njere dzandinogona kuratidza kune hupenyu?
Enda pane enda uye nyora mhinduro dzako kune iyo 5 mibvunzo, zvaizokugonesa iwe kuwana laser yakanangidzirwa kune iyo nyowani yr.
8 Matanho Matsva Evanhu 2021 – Maitiro Ekuita Kuti Gadziriso Yako Idzva Idzva Iitike
Iwe unoziva here izvo kumhanya kwenguva kwakabata mukati 2021 zvako? Uri ikozvino dreading kuuya yr pamwe nemamwe kudanwa kuti woga zvakavanzika zvinangwa uye vavariro? Zvinosuruvarisa, Zvisarudzo zveGore Idzva zvinoitwa kuti zvikuvadzwe. Vazhinji vanhu vanoshaya kuomarara kwepfungwa kurova zvipingamupinyi zvavanotarisana nazvo nechinangwa chekuvamisa kuti vasakwanise kuita sarudzo yavo.
Zvinoenderana neStatisticbrain.com's 2020 tsvakurudzo, vanhu vazhinji vanogona akasimuka kuti vawane kwavo New Year chisarudzo. Vanhu vazhinji vanotanga kubuda nekutsigira kwavo sarudzo nenzira yevhiki rechishanu (75%). Asi zvakadaro, dzvinyiriro yehupenyu uye zvakasiyana zvinhu zvinokonzeresa zvakanyanya kumira mukati memwedzi mitanhatu, kunze kwekunge zvimwe vakazvipira zvakanyanya (46%). Zvisinei, chete 45% yevaAmerica vanowana mazano avo. Makumi matatu nemapfumbamwe % yeavo vanhu ve20s yavo vanowana yavo sarudzo, nepo chete 14% yevanhu vanopfuura zera re 50 wana mazano avo. Chimwe chinhu chinofanira kuchinja kana tichida mhedzisiro yekuguma.
Zvisinei nekuparadzwa uye kusviba kwemaTV pundits, kuva nenzira yakajeka uye kuronga kweiyo yr kunogona kuvandudza mikana yako yekubudirira iyi yr. Asi zvakadaro, hapana hurongwa hunogona kuve hunobatsira chaizvo ne positivism mukufunga kwako. Kutenda izvozvo 2017 inogona kunge iri pamusoro kupfuura makore ekutanga inopa munhu iyeye nzira yetariro. Tariro yakatsanangurwa se “kunzwa kwekutarisira uye kushuvira kwechimwe chinhu kuti chiitike.” Kana nyaya dzisingatarise zvakanaka pasi, tariro inoramba iripo. Tariro yakakosha pakuita sarudzo yegore Idzva kuzadzikiswa zvisinei nezvipingamupinyi.
Writer Viktor Frankl wrote Kutsvaga Kwemunhu kune Chinoreva, chronicling his life expertise as a prisoner in a Nazi focus camp in World War II. Frankl akawana tariro mune yake inosiririsa mamiriro ezvinhu: “Kana tisisakwanise kuchinja mamiriro – tinopikiswa kuti tizvishandure pachedu. Zvese zvinogona kutorwa kubva kumurume, asi chinhu chimwe: yekupedzisira yerusununguko rwevanhu – kusarudza mafungire emumwe mune chero mamiriro ezvinhu, kusarudza nzira yako wega.”
Kana izvo zvaunowana pasi kuti uite pamwe nehurongwa hwako zvaisashanda, zvakakosha kuti uve nehutano hwepfungwa kuti uenderere mberi. Saka, isu tinotarisira uye tinotarisira pazvinhu zvakakwirira kuti tiite semhedzisiro yekuti isu tave nemhando yakakodzera yekufunga pamusoro pezve nehurongwa hwakanyorwa hwekushandisa. Saka, vanhu havafanirwe kupinda mune ino yr netariro kunze. Dzinotevera dzakavanzika nzira dzinopihwa dzeGore Idzva:
Vaka tariro uye tarisiro mune yako hunyanzvi.
Wongorora mamiriro ako ezvinhu pari zvino pabasa nekugara. Uri kuendesa kumberi kana kungomira zvakadaro?
Nyora pasi zvibodzwa zvako uye uzviteerere kune iyo yr.
Funga nezve yakanakisa nzira yekusimudzira yako chaiyo munhu mamiriro neako-wega kudzidza, zvekutengeserana / zvitupa zvine hunyanzvi, uye nzira nyowani yebasa nzira.
Tsvaga vanopa mazano vanogona kukubatsira iwe pamwe nezvinangwa zvako zvakavanzika.
Kukura kwako kusiri kwenyika kugara zvakanaka sechikamu chehupenyu hwako hwese hwekugara.
Bvisa kusagadzikana kusine chinangwa muhupenyu hwako uye vanhu vanoparadza.
Kukomberedza zvako pachako nenharaunda inovaka yevanhu.
Yr 2021 uye zvakapfuura zvakazara nezvinhu zvakawanda zvekusava nechokwadi. Makore anotevera anovimbisa kuwanda kwezviitiko zvisingatarisirwi zvakaenzana nekubviswa basa, magandanga, matambudziko emari, kana kutyisidzira kwehondo. Ichi chinyorwa chakaratidza kuti vanhu vanofanirwa kufunga sei nezvekusvika pagore Idzva uye nekupa nzira dzinofungisisa. Pakati penzira idzodzo pane tariro.
Mufundisi Richard S. bhurawuni, Mufundisi wePayne Avenue Baptist Church (Tennessee), akabvuma ichi chaicho chikuru: “Handizive kuti ramangwana rakamira sei. Zvisinei, Ndinoziva ndiani akabata ramangwana.” Vanhu vakagadzirira zvakanaka Nyowani Nyowani vane mukana wakakura wekubudirira. Kuva neakakodzera-seti yakakosha. Yako kona inonyanyisa kuratidza kubudirira kwako iyi yr. Usazvitore zvakadzikama.
Iyo Yakanyanya Kupinda YeGore Idzva
Kune akawanda magedhi eGore Idzva, ipi yawakambofunga kushandisa? Vanhu, nyaya nemamiriro ezvinhu zvinowanzo sarudza sarudzo kana nhanho vanhu vanodzikamisa hupenyu. Zvisinei, hapana chimwe cheizvo zvataurwa pamusoro chingatyaire iwe kusarudza nenzira yavo, iwe ndiwe wekupedzisira kutora sarudzo uye kuishandisa. Ichi chinyorwa chinokuudza iwe unoshanda kwazvo mukova weGore Idzva.
Pane imwe nzira inoita senge yakakodzera kumunhu, Asi kupera kwayo ndiyo nzira yakanakisa yekufa – Zvirevo 14:12 (NKJV).
Uye Akandiudza, “Zvapera! Ndini Arufa naOmega, Mavambo neMagumo. Ndichapa kune tsime remvura yeupenyu pachena kune uyo ane nyota – Zvakazarurwa 21:6 (NKJV).
Pinda negedhi rakatetepa; nekuti rakakura suwo uye yakafara ndiyo nzira yakanakisa inoguma nekuparadzwa, uye kune vazhinji vanopinda nayo. Nekuti rakatetepa ndiro gedhi uye rinonetsa ndiyo nzira yakanakisa inoguma muhupenyu, uye kune vashoma vanoiwana – Mateu 7:13-14 (NKJV).
Kune akawanda mahombe akavhurika masuo egore Idzva, izvi zvinombundirana: gedhi risingatenderi, gedhi rekugunun'una nekunyunyuta, suwo rekukanganisa, gate rakatsamwa, rakasuruvara suwo, Gedhi rakatsamwa, zvichingoenda zvakadaro., zvakadaro, panogona kunge paine suwo rakatetepa remubairo nekutenda. Ndeupi wauri kuenda kunopinda muNyika Idzva?
Unogona kunge uine ‘zvikonzero chaizvo’ nei uchifanira kupinda mune rimwe remasuwo mazhinji akakura, zvisinei ndiwo musuo unobudirira kwazvo wekushandisa? Chokwadi, vanogona kuoneka vakakodzera kwauri, zvakadaro kupera ndiyo nzira yakanakisa yekuparadza nekufa (Zvirevo 14:12, Mateu 7:13). Suo rakatetepa remubairo nekutenda rinogona zvakare kunetsa kufunga zvikonzero zvako chaizvo zvakadaro zvinoguma nehupenyu (Mateu 7:14). Be among the many few who will discover it.
All the vast gates could seem justifiable for use, zvisinei ivo ndiwo mamwe masuo akakomba kupinda muNyika Idzva. Ivo vanongopa chete muvengi marezenisi ekuwedzera ekutambudza iwe zvakawedzera. Kana iwe uchizokunda muvengi saka zvakakosha kuti urege kuimba nziyo dzake, izvo zvinomutsidzira iye kwauri. Sarudza kuti uone maropafadzo eiri yr; zvinoenderana nemakomborero ako uye ugozvizivisa imwe mushure meimwe, uye iwe uchaona zvikonzero zvekutora mubairo uye suo rekutenda.
Mwari ndiye Arufa naOmega weari kuuya yr uye Akavimbisa kuunza tsime remvura yehupenyu pachena kune chero munhu ane nyota, zvisinei hazvo kunofanirwa kupinda mumasuwo ake nekutenda uye kumatare nemubairo (Mapisarema 100:ina). Sarudza kupinda Gore Idzva rakazara nezvinhu zvekutenda uye nekurumbidza, ramba kunetswa neizvo zvisina kushanda nenzira yakanakisa iwe yawakazvitarisira uye gadzirira iyo nyowani nyowani nekutarisira kwakanaka (Zvirevo 23:18). Gadzira pfungwa dzako kuti ufare mukati maIshe hazvina basa kuti chii chinouya mukati mekuuya yr, uye ndinokuzivisai, muvengi haazokwanisi kuba kubva kwauri.
Kutenda nemubairo zvinonyengera Mwari uye ndiyo nharaunda yaanoshandisa (Mapisarema 22:tatu). Mumwe munhu anoonga maoko ake mapfumo muhondo dzake kuna Mwari uye ndiani anogona kukunda Mwari? Maererano ne 2 nhoroondo 20:14-30 Mwari akayambira muIzirairi kuti kurwa ndekwake, uye mushure mokunge vatanga kurumbidza nekupa kuna Ishe, He completely defeated their enemies and gave them victory and nice spoils. God has not modified, one good way of partaking God in your affairs is to reward and provides due to Him. It works like fireplace!
God, the Almighty God and creator of the New Year recommends reward and thanksgiving for improve, success and victory (Mapisarema 67:5-7). If you want a greater subsequent yr, then it’s knowledge to place apart what your flesh and circumstances are dictating to you and select the Master’s greatest Entrance to a New Year.
KUKUSHUMIRA UYE GORE ITSVA INOFARA UYE INOBUDIRIRA
10 Nzvimbo Dzakanakisa dzekuenda Kugamuchira Gore Idzva muIndia
Gore Idzva ndiyo nguva yekufara kuuya kwekufamba kwenguva uye kutaura zvakanaka kune anopfuura yr. Sezvo nyika inopemberera kutanga kwechinhu chitsva kutanga, India inogona kunge ichigadzirira kumberi kuronga zviitiko zvekucherechedza kuuya kweGore Idzva. Kana iwe uri mukutarisira kwekuwana pamwe nzvimbo muIndia, chinyorwa ichi chinopa imwe chiratidzo nezve izvo. Heino nhamba yeiyo yepamusoro 10 Places in India which just remember to spend your New Year with nice celebratory cheer.
It is the right heady combination of get together life and celebratory music. You can booze and have enjoyable within the chilly backdrop of sea-shore within the evening. You have a number of nice membership, unique delicacies, fireworks and really cool atmosphere for good outing. The Beach events at Vagator uye Anjuna are crowd-pullers as they provide spectacular atmosphere. Perhaps, you need to be a part of them too in these locations.
It is a quaint little city nestled within the lap of Dharmsala mukati Himachal Pradesh. This metropolis provides the texture of mountainside the place you possibly can take pleasure in an eclectic alternative of cuisines at price range costs. The scenic magnificence the small-time metropolis offers one other dimension to the get together revelers.
Iyo inopa yakawanda-inodikanwa kudzikiswa kubva kune yemusango metropolis hupenyu kwauri uye inokupa iwe pfungwa yekuve uri chikamu chehunhu. Ndosaka vanhu vachizvitumidza sechidimbu chedenga. Iyo ine imwe yemazhinji akanakisa emahotera ekugara pasi. Runako rwechando chena rweguta rakanakira kuti upinde iwe mune iwo unofara mhemberero hasha yekugamuchira Gore Idzva.
Iyo nyika inofungidzirwa kune ekumashure emvura. Iwe unogona kukweretesa imba-chikepe mune aya ekumashure emvura uye unofara mune rako Nyowani Nyowani nevako vaunoda uye vakaroorana. You additionally do have the choice of seashore events which might be unique and enthralling. With locations like Varkala that entice loads of worldwide crowd round, the seashore aspect fantastic thing about the place is a perfect New Year vacation spot.
New Year-Kubwinya In The soro! Runyararo Pasi Pano!
Kugadzirira kwezvivindi ndezve munhu, asi mhinduro yerurimi inobva kuna Ishe (Zvirevo 16:1, NKJV)
“Mbiri kuna Mwari kumusoro-soro, nerugare panyika, kufarira kune vanhurume!” (Ruka 2:14, NKJV)
Chii chauchachengeta mundangariro final yr ye?
Mwoyo unotenda wecoronary unozochengeta mupfungwa dzese hombe nyaya dzakaitwa naMwari kuburikidza ney, zvinetswa zvakadaro. Iwe unofanirwa nguva dzose kuzviyeuchidza iwe pachako kuti kana zvisiri zvaMwari, zvichange zvanyanya. Kana zvisiri chero chinhu, chengeta mupfungwa mweya uri mumhino dzako. Hallelujah! Canine yekugara yakanakisa kupfuura shumba isina hupenyu.
Zvinoda kuonga uye kurumbidza kwakanyanya kuna Mwari. Rugwaro rwunoti iwe unofanirwa kupa kutenda mune yese mugove, for that is the desire of God in Christ Jesus for you. Verenga makomborero ako uye ugozvizivisa imwe mushure meimwe uye iwe unokatyamadzwa nezvakapedzwa naShe.
Wakapedza here yr mukudemba, kuvava, hasha nekushungurudzika kana mukunakidzwa uye mufaro wecoronary moyo? Zvakanaka! Chinhu chakanaka chave kuda kuitika. Iwe unofanirwa kuve unotarisira, moyo wako wecoronary uzere nechitendero nekutenda. Pane here chakanyanya kunetesa Mwari? (Jeremiah 32:27) Chokwadi, hapana chisingagoneki naMwari (Mateu 19:26)
Wakapinda sei Gore Idzva?
Wakafamba-famba muNew Year uchifungidzira kuti ikupe iwe zvaunoda? Izvo hazvizove zvine musoro, semhedzisiro yemurume anonzwisisa akataurwa, “hupenyu hahuzokupe iwe zvaunokodzera zvisinei izvo zvaunoda” Ukasadaidzira mugove wako wezvikomborero zvaMwari kubva ku yr, iwe uchademba izvo zvaizokushandira iwe. Gore Idzva rinoda danho repamusoro rekugadzirira mumunamato nekutsanya, uye mukati memutsara. Iwe unofanirwa kuronga pamberi pekunge Mwari vachakupindura (Zvirevo 16:10).
Unoisa kupi Jesu Kristu?
Nzvimbo yaKristu muhupenyu hwako ndiyo inosarudza zvichauya kwauri. Kana Jesu ari Ishe pamusoro pehupenyu hwako, hupenyu hwako hungangozadzwa nerunyararo, nekuti ndiye muchinda worugare (Isaya 9:6). Murege ave newe pagore Idzva iri saIshe wako uye the yr vachakurukura rugare.
Kutanga naJesu uyu Gore Idzva, enderera naye uye the yr will ship to you what you deserve.
HAPPY HAPPY GORE ITSVA!!!
Zvinangwa Zvitsva, Goredzva
Kana pangava nechimwe chinhu chandinonyatsonzwa pakubuda kwezuva rerudzi nyowani yr, iko kutenda. Haasi munhu wese akazviita. Tiri ropafadzo mijenya kuti vakapinda muchiso itsva yr, uye kupihwa sarudzo yekutanga patsva, kamwe zvakare.
A hachizi itsva yr nguva dzose zvindori mukati pamwe inotsiva uye zvinogona. Kune nguva yese tariro tariro imwe nzvimbo mumashure pendangariro dzedu. Iyo tariro yekutanga zvakare nzvimbo yatakatadza kare pane. Kuti tizvisarudzire isu pachedu kubva kunenyaya idzo pamwe dzinotibvumidza kuti tidzikise pasi pakutanga pane. Kumisikidza nyowani zvinangwa, kana kuti zvimwe edza kuramba uchitevera izvo zvakanakisa izvo isu zvatove zvatowana. A hachizi itsva yr means loads of issues. Haisi chete mhemberero yazvo yese, zvisinei pamwe chete kunouya mizhinji yemweya inotarisa – chinhu chimwe icho mumwe nemumwe wedu anofanira kuita chega chega nguva nenguva.
Panguva ino ye yr, tinotarisa zvakare tofunga nguva dzakapfuura. Yekuti nguva yave kufamba sei munguva pfupi, uye mukati mekubwaira kwewachi, imwe imwe yr yapera. Isu tinofunga kuti isu tave kurarama sei edu akakosheswa mazuva pamberi pezvino yr. Takazadzisa here zvinangwa zvedu? Tave tichifara here? Tave kugutsikana zvinhu? Have we been the individuals we needed to be? Have we pursued our targets? Have we lived our goals? Have we discovered pleasure within the easy issues of life? Have we made every day depend?
50+ Happy New Year Image Mapikicha E 2021
Goredzva Rakanaka Malayalam
Goredzva Rakanaka muJapan
Goredzva Rakanaka HD Video songs 1080p free download
Goredzva Rakanaka HD Movie
Goredzva Rakanaka 2074
Goredzva Rakanaka Kumurume
Goredzva Rakanaka Vhidhiyo inosetsa
Goredzva Rakanaka hd movie download
Goredzva Rakanaka 2019 dj song
Goredzva Rakanaka 2020 animated gif
Goredzva Rakanaka 2021 mapikicha emifananidzo
Goredzva Rakanaka 2019 mureza
Goredzva Rakanaka 720p download
2020 Goredzva Rakanaka Photo
Diwali poster poster
download kufara itsva gore mifananidzo
Mangwanani akanaka Goredzva Rakanaka
Kisimusi yakanaka uye mifananidzo yakanaka yegore idzva
gore idzva rinoshuvira vhidhiyo
nziyo dzegore idzva muHindi
gore idzva eve zvinoreva
kufara parsi gore idzva
mufananidzo gore idzva
makorokoto egore idzva muHindi
Goredzva Rakanaka video song free download
ndinofara new gore movie video songs
Goredzva Rakanaka sms
Happy new gore meseji 2021
Goredzva Rakanaka Movie Torrent
Happy New Year Sms Kune Anoda
erotik Mbudzi 13, 2020